PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - Amapolisa athandazelwe ngamaWisile
Amapolisa athandazelwe ngamaWisile
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - IINDABA - ABONGILE GINYA
AKUNYANZELEKANGA ukuba ibe nguwe ixhoba lokuxhatshazwa nokuphatheka gadalala, isenokuba ngumama wakho, usisi, okanye isihlobo esisondeleyo kuwe, yiyo le nto kufanele ibe yingxaki yomntu wonke imeko yokuxhatshazwa ekujoliswe kwisini.
Lawo ngamazwi aphuma kuBrigadiya Pumla Mdlankomo ongumasitishi kwisikhululo samapolisa eCambridge eMonti.
Ebethetha kwibandla lamaWisile eTrinity edolophini eMonti ngethuba amapolisa ethandazelwa leli bandla. Ezona beziphambili zithandazelwa kukubulawa kwamapolisa esemsebenzini, ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana, kukwathandazelwa neenkokheli zephondo kwakunye nezikazwelonke.
Zithandazelwe neziganeko eziliqela zokubulawa kwamapolisa esemsebenzini, amahlanu awaseNgcobo kwakunye naseNgangelizwe eMthatha.
UBrigadiya Mdlankomo uthi akukho namnye umntu oyakuphinda aphume esikhululweni engahoyekanga xa eyokumangala.
“Amaxhoba iye ibe ngabantu abangootata abathi bayahlekwa ngamapolisa xa beyokuvula amatyala okuxhatshazwa ngamakhosikazi abo. Oko sifuna kuphele, amatyala aphathwe ngokufanayo. Ukuxhatshazwa kuyafana, kwaye ayamkelekanga nento yokujikwa kwamaxhoba kuba kusithwa makathethe isikhaya, avunyelwe umntu avule ityala xa efuna njalo,” utshilo uMdlankomo.
Kokokuqala amapolisa ebamba umsitho okumila kunje nenkonzo. UMdlankomo uthi useza kuqhubekeka nakwezinye iinkonzo ezohlukeneyo.
Uthi ebekwiphulo lokuthatha iintsuku ezingamashumi amabini ethandaza, apho kusuku lwesithathu eye wanombono kusenzeka okwenzeke eTrinity ngeCawa.
Igosa eliphezulu lesekethe eTrinity, uMfundisi Mlandeli Nonxuba, ulincomile iphulo elithe lenziwa ngamapolisa, esithi ilizwi likaThixo lisebenzise.
Uthi amatyala amaninzi kule mihla yokuphila sele ekhona nasezicaweni. “Nokuba ungumphathi wecawa okanye ungumfundisi, xa wonile kufanele udibane nengalo yomthetho.”
UMdlankomo ukwabongoze ulutsha ukuba malilungisane, lohlukane nolwaphulomthetho, kuba lulo oluza kube luphethe ilizwe kwiminyaka ezayo.
Ukwabongoze nokuba abantu bazikhathalele kweli xesha leziyunguma.